Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » IBoeing ibhengeza utshintsho kwiBhodi yaBalawuli
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
I-Boeing inyula uDavid L. Joyce kwiBhodi yaBalawuli; U-Admiral Edmund P. Giambastiani Jr. uthathe umhlala-phantsi kwiBhodi.
UDavid L. Joyce unyulwe kwiBhodi yabaLawuli ye-Boeing.
U-Admiral Edmund P. Giambastiani Jr. uthathe umhlala-phantsi kwiBhodi yaBalawuli be-Boeing.
Utshintsho kwiBhodi yaBalawuli ye-Boeing lusebenza kwangoko.
Ibhodi yabalawuli yeNkampani ye-Boeing namhlanje ibhengeze ukuba uDavid L. Joyce unyulwe kwibhodi, esebenzayo kwangoko. Uza kusebenza kwiikomiti zoKhuselo kunye neMbuyekezo yeAerospace. Ibhodi ye-Boeing namhlanje ikwazisile ukuba u-Admiral Edmund P. Giambastiani Jr. uxelele inkampani ukuba uzakuthatha umhlala phantsi kwibhodi ekupheleni kuka-2021.
UDavid L. Joyce unyulwe kwiBhodi yabaLawuli ye-Boeing
Umphathi ophumelele i-aerospace, uJoyce, 64, uthathe umhlala-phantsi Umbane ngokubanzi (GE) njengoSekela Sihlalo ngo-2020, nalapho asebenza njengoMongameli kunye ne-CEO ye-GE Aviation ukusukela ngo-2008 ukuya ku-2020. kwaye ikongamele ukwenziwa kwenkqubo ekhokelayo kulawulo lokhuseleko kwiGE Aviation.
Umlindi oneminyaka engama-40 we-GE, uJoyce wajoyina GE Uhambo ngo-1980 njengenjineli yemveliso kwaye wachitha iminyaka eli-15 eyila kwaye ephuhlisa iinjini zorhwebo nezomkhosi ze-GE, ngaphambi kokuba asebenze kwizikhundla ezahlukeneyo zobunkokeli kwi-GE Aviation, kubandakanya nosekela mongameli kunye nomphathi jikelele wee-Injini zoRhwebo. UJoyce uzuze zombini isiDanga seNzululwazi kunye nesidanga senkosi kubunjineli boomatshini kwiYunivesithi yaseMichigan State kwaye ubambe inkosi kwezemali kwishishini kwiYunivesithi yaseXavier.
"UDavid Joyce yinkokeli eyaziwayo yeshishini leenqwelo moya ezisa irekhodi lobunkokheli kwezokhuseleko, ubuchule bobunjineli kunye nokusebenza okugqwesileyo kwibhodi yethu," utshilo. iBoeing Usihlalo uLarry Kellner. Uyakukubonelela ngengcebiso ebalulekileyo kunye nesikhokelo esisekwe kumava akhe abalulekileyo.
UJoyce ulilungu leZiko leSizwe lobuNjineli, kwaye ukwamkele imbasa yeNkokeli yezoShishino yoKhuselo yeLizwe yeJames Forrestal yeMbasa yeNkokeli kunye neMedali yoMbutho waseMelika yoPhuculo loPhando. Ukusukela ngo-2010, usebenze kwiBhodi yeTrasti yeYunivesithi yaseXavier.
"iBoeing uzakuxhamla kulwazi olunzulu lokuhamba ngenqwelomoya kuDavid Joyce kunye nobudlelwane kushishino olubanzi, utshilo uDavid Calhoun, umongameli we-Boeing kunye ne-CEO, kunye nelungu lebhodi yabalawuli. "Amava kaDavid aguqula amashishini kwaye ajolise kumgangatho nakukhuseleko kwishishini le-aerospace liza kuqinisa ibhodi yethu."
UJohn jenkins uthi:
NgoSeptemba 1, 2021 kwi-02: 46
Umnumzana Joyce lukhetho oluhle ngobunkokeli beBoeing. Imfundo yakhe kunye namava aya kumenza akwazi ukufaka isandla kwisicwangciso se-Boeing sokuthatha izigqibo. Ndiyayincoma iBoeing ngolu khetho, ngokungafaniyo nokukhethwa kwamalungu eBhodi enzelwe kuphela isenzo sokuvuma. Ukusebenza kwequmrhu laseMelika kubalulekile ekugcineni uqoqosho lwethu kunye nokhuseleko lwesizwe.